Qorshaha suuqgeynta: shaxanka ugu dambeeya ee umuuqda pro | Abuurista khadka tooska ah
Qorshaha suuqgeynta: shaxanka ugu dambeeya ee u eg pro
Encarni Arcoya | | dhowr
Waxaa jira waqtiyo, ama maxaa yeelay waxaad bilaabeysaa xiisaha ganacsiga, ama inaad ka shaqeysid waaxda suuqgeynta, inaad la kulantid qorshooyinka suuq-geynta cabsi leh. Waxay yihiin warbixino kaa caawinaya inaad ogaato waxa istaraatijiyad shirkadeed noqonayso. Laakiin farsamaynta iyaga ayaa kaa gaabin kara. Nasiib wanaagse, waxaad haysataa ikhtiyaarro, sida qorshe suuq-geyn moodle ah oo aad ka hesho khadka tooska ah.
Haddii aad dooratid inaad adigu sameyso ama aad sameyso qorshe suuq-geyn ah oo leh shax, ugu horreyntii waxaad u baahan tahay inaad aragto dhowr fikradood si aad u ogaato kan ugu habboon ganacsigaaga ama adeeggaaga. Xoogaa ma ku siin karnaa?
1 Waa maxay qorshe suuq-geyn ah
1.1 Macluumaad noocee ah ayey u tahay qorshe suuq-geynta suuq-geyn
2 Sida loo abuuro qorshe suuq geyn ah
2.1 is ogow
2.2 Dejiso yoolalkaaga
2.3 Deji istaraatiijiyada
2.4 Ficil iyo falanqeyn
3 Barnaamijyada lagu samaynayo qorshe suuq-geyn leh sheybaarro
3.5 Infographics leh Photoshop
Waa maxay qorshe suuq-geyn ah
Kahor intaadan bilaabin qorshaha suuqgeynta iyo sheybaarka, waa inaad ogaataa waxa aan tixraaceyno. Sababtoo ah, qaabkan, waxaad ogaan doontaa waxa ay tahay inaad geliso si uu u noqdo mid waxtar leh.
Qorshaha suuqgeynta ayaa runtii ah a dukumiinti ay ku jiraan istiraatiijiyadda la raacayo, sannad kasta, saddexdii biloodba ama bil kasta. Waxay dejisaa tilmaamaha si loo gaaro ujeeddooyinka la dejiyay, badiyaa kordhinta iibka ganacsiga, yeelashada dhagaystayaal badan, iwm.
Macluumaad noocee ah ayey u tahay qorshe suuq-geynta suuq-geyn
Gaar ah, macluumaadka lagu daro shaxda qorshe suuqgeynta Waa sida soo socota:
Ujeeddooyinka la dejiyey oo kooban. Si loo ogaado haddii, ansaxnimada qorshahaas ka dib, la fuliyay iyo in kale.
Falanqaynta xaaladda ganacsi ee hadda jirta (si hadhow loo barbardhigo tan hadda jirta).
Istaraatijiyadaha qeexan ee qorshaha, taas oo ah, in la ogaado waxa la qaban doono si loo gaaro ujeedooyinkaas.
Qiyaasaha la raacayo, si loo ogaado haddii istiraatiijiyaddu tahay mid sax ah oo ujeeddo leh.
Qorshaha suuq-geynta wuxuu u adeegaa, bogag kooban, inuu arko istiraatiijiyadda caalamiga ah ee lagu raacayo maaddadan. Iyo, tan, internetka waxaad ka heli kartaa arrimo badan oo kala duwan, qaarna macluumaad ka badan kuwa kale.
Sida loo abuuro qorshe suuq geyn ah
Habka wax ku oolka ah, waxaan u sharaxeynaa sida ay tahay inaad u sameysato qorshe suuq-geyn ah. Si tan loo sameeyo, waa inaad raacdaa taxane ah talaabooyin ku siin doona macluumaad badan. Kadib, waa inaad macno u yeelatid oo aad ku soo bandhigtaa dukumiinti ka badnaan kara ama ka yaraan kara (laga bilaabo infographic ilaa dokumenti bogag badan leh).
Tallaabooyinku waa sida soo socota:
Labadaba shirkadda iyo adiga, iyo sidoo kale dadweynaha aad la hadlayso. Qiyaas inay ku weydiiyaan su’aasha soo socota. Kumaad tahay o Yuu yahay shirkadani? Waad ubaahantahay ogow cidda aad tahay iyo waxaad samaynayso maxaa yeelay, haddii aadan jawaab ka bixin, waxay ka dhigan tahay inaadan wax fikrad ah ka haysan sida ay shirkaddu u shaqeyso iyo cidda xiisayneysa.
Isla mar ahaantaana, waxaad u baahan tahay inaad ogaato cidda aad beegsanayso, taas oo ah, yaad ka caawinaysaa adeegyadaada ama shirkaddaada. Tani waa waxa loogu yeero dhagaystayaasha bartilmaameedka ah, waana inaad qeexdaa inaad ku heshiiso xeeladaha si aad dadkaas u gaarto.
Tallaabada xigta, markaad ogaato waxaad tahay iyo cidda aad u socoto, waa inaad ogaato waa maxay yoolalka aad leedahay. Kuwani waxaa loo tixgelin karaa muddada gaaban, dhexdhexaad ama muddada dheer. Talada khubarada ayaa ah in mid walbo la dhigo, sidan ayaa qorshaha suuq geynta loo isticmaali karaa waqti dheer (inta ay shaqeyneyso).
Xaaladdan oo kale, waa inaad gelisaa wax kasta oo lagu qaban doono la kulmaan ujeedooyinka kor ku xusan oo aan ka tagin "shakhsiyadda" shirkadda ama adeegga, iyo waliba dhagaystayaasha bartilmaameedka ah.
Tusaale ahaan, ka soo qaad inaad tahay buugaagta buugaagta dhaqaalaha. Dhageystayaashaada bartilmaameedka ah waxay noqon doonaan akhristayaal daneeya dhaqaalaha, ganacsatada ... Laakiin dhagaystayaashaadu ma ilmo bay ahaan lahaayeen? Kadib, istiraatiijiyaddu waa inay laxiriiraan dadkaas dhaqaalaha kaquseeya (in kabadan 18, rag iyo dumar, oo leh dano dhaqaale (midkoodna shaqsiyadeed ama ganacsigiisa) ...).
Ficil iyo falanqeyn
Ugu dambeyntiina, waad ku soo lifaaqi kartaa muddada uu qorshahan suuqgeyntu shaqeyn doono oo la falanqeyn doono si loo arko inuu waxtar leeyahay iyo in kale. Haddii aysan ahayn, waa inay noqotaa in la beddelo si loo beddelo waxa aan shaqeynin oo loo tijaabiyo wax kale.
Barnaamijyada lagu samaynayo qorshe suuq-geyn leh sheybaarro
Marka xigta, waxaan kuu sheegeynaa xoogaa barnaamijyo kaas oo lagu sameeyo qorshe suuq-geyn ah oo leh sheybaarado. Sidaa darteed, haddii aad sameysid qorshe bille ah, saddex-biloodle ah ama sanadle ah, waxaad had iyo jeer isku haleyn kartaa shaxanka aad sameysay markii ugu horreysay.
Barnaamijyada aan kula talinayno waxaa ka mid ah:
Runtii maahan barnaamij "bilaash ah", tan iyo waa inaad isdiiwaangalisaa oo hubaal inaad bixisaa isticmaalkeeda, laakiin waxay ku siineysaa labadaba sheybaar aasaasi ah iyo suurtagalnimada abuurista adiga kuu gaar ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay diiradda saarayaan maadada xirfadeed sidaa darteed natiijada waxay noqon doontaa mid quruxsan oo culus.
Sida iska cad, Canva waa inay ahaato. Waa mid ka mid ah aaladaha ay jecelyihiin naqshadeeyayaasha badan, iyo waliba kuwa u baahan inay sameeyaan qorshe suuq geyn leh sheybaar ku habboon.
Marka hore, maxaa yeelay waa bilaash. Iyo tan labaad, maxaa yeelay waa mid aad ka heli doontid ilo badan. Waxay leedahay tusaalooyin aad ku heli karto fikrad ah sida qorshaha suuqgeyntu u ekaan lahaa, laakiin waxaad ka abuuri kartaa meel hoose. Xitaa waad u habeyn kartaa arrimo si aad ugu darto astaantaada, sawirrada shirkadda, iwm. si looga dhigo mid shaqsiyadeed.
Ayaa yidhi Word, sidoo kale wuxuu ka hadlayaa noocyadiisa kale, sida OpenOffice ama LibreOffice (oo isku mid ah laakiin bilaash ah). Barnaamijkan badanaa waa caadiga ah in lagu fuliyo qorshe suuq geyn iyo dhab ahaan, qaar badan oo ka mid ah tusaalooyinka aad ka hesho internetka ayaa loo sameeyaa sidan.
Waxaad leedahay faa iidada aad ku saxi karto si aad ugu darto macluumaadka aad u baahan tahay waxayna taageertaa sawirada, sawirada, qaababka, miisaska ... Marka waa wax aad u xiiso badan in la isticmaalo.
Sidoo kale xafiiska xafiiska, ka PowerPoint waa qaab kale oo loogu sameeyo qorshahaaga suuq-geynta qaab-dhismeedka. Si aad ah looma isticmaalo sidii tii hore, laakiin waxay ku siisaa astaamo kale oo ka dhigaya mid muuqda (waxay u soo bandhigi doontaa macluumaadka sida isbadal).
Infographics leh Photoshop
Ama barnaamij kasta oo tafatir sawir ah. Xaaladdan oo kale, waxaad dooran kartaa inaad sameyso infographic ama kooban qorshaha suuq-geynta oo leh sawiro iyo sawirro muuqaal ah oo gacan ka geysanaya qabsashada nuxurkeeda.
Tanna waad sameyn kartaa labadaba leh Photoshop iyo barnaamijyo kale oo tafatir sawir ah, sida internetka oo dhan (tusaale ahaan Canva).
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Qorshaha suuqgeynta: shaxanka ugu dambeeya ee u eg pro
Moodellada degellada bilaashka ah